မိထ္တီလာမြို့မှာ ပွက်လောရိုက်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ် နောက်ကွယ် က လူတွေ မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာ – Zartiman
မိထ္တီလာမြို့မှာ ပွက်လောရိုက်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ် နောက်ကွယ် က လူတွေ မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာ
မိတ္ထီလာမြို့ဖြစ်စဉ်က နောက်ဆုံးပြောရရင် ကျွန်တော့် အကိုဟာ ထောင်ကျမှာဖြစ် ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့လည်း အဲဒီကိစ္စကို လက်ခံပါ တယ်။ အခုပိုစ့် တင်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တော်ဟာ အဖေအမေ နဲ့ ကိုကျော်ဝင်းသန့်ရဲ့ ဇနီးနဲ့သမီး မိသားစုရဲ့လုံခြုံမှုကို ဂရုစိုက် စေလိုတဲ့ အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ ရိုးရိုး သားသားနေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေပါ။ မိတ္ထီလာ မှာဆွေမျိုးလည်းမရှိပါဘူး အားကိုး စရာလည်းမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်အကိုဟာလည်း သူ့လုပ်ရပ်အတွက်သူ တရားဥပဒေရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို သူခံပါလိမ့်မယ်။
သူ့ဟာ မိတ္ထီလာမြို့မှာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိသလို။ သူ့ရဲ့နောက်ကွယ် မှာ အနီတွေ အစိမ်းတွေမပါပါဘူးဆိုတာ အလေးအ နက်ပြောချင် ပါတယ်။မိတ္ထီလာ မြို့နေ သံဃာတော်များ မြို့မိ မြို့ဖ များ တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ လူပုဂ္ဂိုလ် များကို ကျွန်တော် အနူးအ ညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။သံဃာတော်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက် ကနေ စော်ကား မိတဲ့ Dr.ကျော်ဝင်းသန့် ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ မိထ္တီလာ မှ အဝေးကို ပြောင်းရတော့မယ်… သူ့ရဲ့ ဇနီးနဲ့ ကလေးလည်း ရန်ကုန်အိမ်မှာ မနေရဲတော့ပါဘူး…။
သူတစ်ဦးရဲ့ အမှား ကြောင့် ကျန်မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး အကျိုးသက်ရောက် သွားရ ပါတယ်။ စိတ်မကောင်း ပါဘူး။ မှားတာ မှန်တာ အသာထား။ လောလောဆယ် လက်ငင်း ဒုက္ခ တွေ့ရပြီး။ အကြောင်းတရား ကြောင့် အကျိုးဖြစ်လာလေပြီ…Dr. ကျော်ဝင်းသန့်ရဲ့ညီ ရေးထားတဲ့ Post ပါ…။ကျွန်တော့် အကိုဟာ တရားဥပဒေ ရဲ့ ဆုံးမမှုကိုခံယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ လိုင်းပေါ်မှာ တစ်ချို့မဟုတ် မမှန်သတင်းတွေနဲ့ အရမ်းကိုဖွနေတာတွေ့ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဖြေရှင်းချင်တာ လေးတွေရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မိသားစုဟာ ရိုးရိုးသားသားပဲနေကြသူတွေပါ။ ဘယ်ပါတီ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဝင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အကိုဟာ လည်း ဘယ်ပါတီဝင်မှ မဟုတ်သလို ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှလည်း ပါတ်သတ်မှုမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်အကိုဟာ သူတင်တဲ့နေ့တုန်းက ရန် ကုန်မှာပါ။ မိတ္ထီလာမြို့မှာမရှိပါဘူး။ မိတ္ထီလာမြို့မှာ ကျွန်တော်ရယ် အဖေရယ် အမေရယ်ပဲရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးသတင်းတွေ တက်လာ တဲ့နေ့က ကျွန်တော်တို့ မိတ္ထီလာအိမ်လိပ်စာအတိအကျနဲ့ တင်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်အဖေနဲ့ အမေဟာ ကျန်းမာရေးမကောင်းပါဘူး။ လူငယ်ဆိုလို့ အိမ်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ရှိတာပါ။ မတော်တဆ လူ တွေဝိုင်းလာရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် အန္တရာယ် အရမ်းများပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သိသိချင်း ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ချို့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး အကြံအ ဉာဏ်တောင်းပါတယ်။ အကြံပေးတဲ့အတိုင်းပဲ အဖေရယ် ကျွန်တော်ရယ်နှစ်ယောက် လိုက်ပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ မြို့ရဲ့အဖွဲ့အ စည်းတစ်ချို့က ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လူကိုယ်တိုင် လာတောင်း ပန်မှကျေနပ်မယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။
ကျွန်တော့်အကိုဆီကိုဖုန်းဆက်ပြီး သူလာနိုင်မဲ့နေ့ကို မေးတဲ့အခါ သူက ချက်ချင်း ရန်ကုန်ကနေ မိတ္ထီလာကိုဆင်းလာခဲ့မယ်ဆိုပြီး ပြော ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ တစ်ချို့ ဖေ့စဘွတ်အကောင့်တွေကနေ လူကိုယ်တိုင် လာမတောင်းပန်ပဲ ညီနဲ့အဖေကို ကိုယ်စားပဲလွှတ်တယ် ဆို ပြီးတင်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလွှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး သူကိုယ်တိုင်က မြို့ပေါ်မှာမရှိတာပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံးတောင်းပန်ပြီး ညနေ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကို ရပ်ကွက် မှ တာဝန်ရှိ လူကြီးများရောက်ရှိလာပါတယ်။
ကျွန်တော်သတင်းတင်တဲ့သူတွေကို အိမ်လိပ်စာဖျက်ခိုင်းလိုက်ပေမယ့် သူတို့ပြင်ပေးတဲ့အခါ သတင်းက အရမ်းပျံ့နှံ့သွားပါပြီ။ ကျွန်တော် တို့ အိမ်‌ကိုလည်း စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိနေကြောင်းလည်း အဖွဲ့အစည်းများ မှပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့လည်း အပြင်မထွက် ရဲပါဘူး။ ညကျွန်တော့်အကိုရောက်လာတဲ့အခါ ရပ်ကွက်ထဲက လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခေါ်ဆောင်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကို အဖွဲ့အစည်းအချို့က လူတွေက ကိုကျော်ဝင်းသန့်ကိုယ်တိုင် မိတ္ထီလာမြို့မှာ ပါချုပ်ဆရာတော်ကို ပင့်ပြီး ဖေ့စဘွတ် မှ live အပါအဝင် အခန်းအနားနဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့်တောင်းပန်ပေးရပါမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။
ဒီမှာ ထပ်ပြီးပြောကြားလိုတာက ကျွန်တော့်အကိုဟာ ဖြစ်လာမယ့် အကြောင်းအရာကို သူနားလည်ပါတယ်။ သူ့ကိုတစ်ခါတည်း ဖမ်းသွား နိုင်တယ်ဆိုတာလည်း သူသိကြောင်း ကျွန်တော့်ကိုပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့လုပ်ရပ်ကိုတောင်းပန်မယ် ရင်ဆိုင်စရာရှိတာ ရင်ဆိုင်ရမှာ ပဲဆိုပြီး အရောက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ ကိုးနဝင်းကျောင်းကို ရောက်တဲ့အခါ လူတွေ အများကြီးစုဝေးနေ တာကိုတွေ့ရပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်တဲ့အခါ ဆရာတော်ကြီးတွေဟာ ခွင့်မလွှတ်ကြပါဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာ အပြင်က လူစုကြီးဟာ အော်ဟစ်နေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့အရမ်းကြောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သေရမှာထက် ကျွန်တော့် အဖေအမေ တစ်ခုခုဖြစ်မှာကို ပိုစိုးရိမ်ပါတယ်။ “အကိုကိုမရိုက်ရရင် ညီကိုရိုက်ကွာ” ဆိုတဲ့အသံတွေလည်း နားနဲ့ကြားခဲ့ရပါတယ်။ နောက် ပိုင်းအဖြစ်ပျက်ကတော့ live မှာမြင်တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော့်အကိုကိုခေါ်သွားတဲ့ ရဲကားကိုခဲတွေနဲ့ဝိုင်းထုကြပါတယ်။ ရဲအချို့ ဒဏ်ရာရသွားတယ်ပြောပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ သံဃာတော်‌တွေ ရပ်မိရပ်ဖတွေ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။
သူတို့သာမရှိရင် ကျွန်တော်တို့ မိသားစုဟာ အသတ်ခံရပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ကျန်တဲ့ မိသားစုဟာ မိတ္ထီလာမြို့မှာ မနေရဲတော့ပါဘူး။ ကျွန် တော်တို့ အဝေးတစ်နေရာကို ထွက်သွားပါတော့မယ်။ ရပ်ကွက်က တာဝန်ရှိလူကြီးတွေလည်း အဝေးတစ်နေရာကို သွားဖို့အကြံပြုပါ တယ်။ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အကို ဘယ်မှာလည်းဆိုတာ မသိရပါဘူး။ သတင်းဌာန တစ်ချို့က မန္တလေးမှာလို့လည်းတင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်အကိုမှာ ဇနီးနဲ့ လူမမည်အရွယ်သမီးလေး တစ်ဦးရှိပါတယ်။
တစ်ချို့ အကောင့်တွေမှာ မဆိုင်တဲ့ ကျွန်တော့်အကိုရဲ့ ဇနီးနဲ့ကလေး မိသားစုဝင်တွေကိုပါ ဓာတ်ပုံနှင့်တကွတင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်အကိုရဲ့ ရန်ကုန်လိပ်စာ တွေလည်းတင်ကြတဲ့အတွက် သူတို့လည်း အဲဒီမှာ မနေရဲတော့ပါဘူး။ ပြီး တော့ သူသေနတ်ကိုကိုင်ပြီး တင်ထားတဲ့ပုံကို ဝိုင်းဖွနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီပုံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်တုန်းက ပုံပါ။ ကျွန် တော့်အကိုဟာ NGO အဖွဲ့တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ် ကယားပြည်နယ် နယ်စပ်တွေကိုသွားရပါတယ်။
အဲ့ဒီ သေနတ်ဟာ လေသေနတ်ပါ။ နယ်စပ်တွေ မှာပေါပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒီပုံကိုပြပြီး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကျောထောက်နောက် ခံရှိရ မယ်ဆိုပြီးပြောနေကြပါတယ်။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှ လေသေနတ်လိုလိုတူမီးလိုလို သေနတ်တွေ မကိုင်ကြပါဘူး။အခုခေတ်ဟာ ဖေ့စဘွတ် အကောင့်တစ်ခုကို လွယ်လွယ်လေး ဖွင့်လိုရတဲ့ခေတ်ပါ။ အဓိကရုဏ်းတွေအတွက်ဖွနေကြတဲ့အကောင့်တွေဆိုတာ အကောင့်တုတွေ များပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ သူ ဖေ့စဘွတ်မှာ အမှတ်မထင် တင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုကြောင့် သူ့မိသားစုကို ထိခိုက်မယ်ဆိုတာ သိရင် သိသိကြီးနဲ့ အကောင့်အစစ်ကနေ တင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။
ကျွန်တော့်အကိုဟာ အရက်သောက်ပါတယ်။ သူ့မှာ အဝလွန်နေတော့ ဒေါသအလွယ်ထွက်တက်ပါတယ်။ သူ post တွေတင်တဲ့နေ့တုန်းက အရက်သောက်ထားပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အရက်မူးတဲ့ကောင်ဟာ ချီးကျွေးရင် မစားဘူး ဆိုကြပေမယ့် အရက်နဲ့ဒေါသ နှစ်ခုပေါင်း လိုက်တဲ့အခါမှာ သိစိတ်ရော မသိစိတ်ရော လွတ်သွားတတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Post မှာ လက်မခံတဲ့သူတွေနဲ့ပြောရင်းပြောရင်း ဒေါသရယ် အ ရက်ရယ် ပါလာတဲ့အခါ တစ်ဖက်သား နာအောင် အဆုံးထိပြောမိသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ညီအကိုနှစ်ယောက်လည်း အဲဒီကိစ္စနဲ့ရန် ဖြစ်နေကျပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားမယ်လို့ မထင်ခဲ့မိပါဘူး။
မိထ်တီလာမွို့မှာ ပှကျလောရိုကျသှားတဲ့ ဖွဈစဉျ နောကျကှယျ က လူတှေ မသိသေးတဲ့ အကွောငျးအရာ
မိတ်ထီလာမွို့ဖွဈစဉျက နောကျဆုံးပွောရရငျ ကြှနျတေျာ့ အကိုဟာ ထောငျကမြှာဖွဈ ပါတယျ။ ကြှနျတျော တို့လညျး အဲဒီကိစ်စကို လကျခံပါ တယျ။ အခုပိုဈ့ တငျရခွငျးရဲ့ရညျရှယျခကျြက ကြှနျတျောဟာ အဖအေမေ နဲ့ ကိုကြျောဝငျးသနျ့ရဲ့ ဇနီးနဲ့သမီး မိသားစုရဲ့လုံခွုံမှုကို ဂရုစိုကျ စလေိုတဲ့ အတှကျပဲဖွဈပါတယျ။ကြှနျတျောတို့ဟာ ရိုးရိုး သားသားနတေဲ့ မိသားစုဝငျတှပေါ။ မိတ်ထီလာ မှာဆှမြေိုးလညျးမရှိပါဘူး အားကိုး စရာလညျးမရှိပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့အကိုဟာလညျး သူ့လုပျရပျအတှကျသူ တရားဥပဒရေဲ့ ပွဈဒဏျကို သူခံပါလိမျ့မယျ။
သူ့ဟာ မိတ်ထီလာမွို့မှာ အဓိကရုဏျးဖွဈပါစဆေိုတဲ့ ဆန်ဒမရှိသလို။ သူ့ရဲ့နောကျကှယျ မှာ အနီတှေ အစိမျးတှမေပါပါဘူးဆိုတာ အလေးအ နကျပွောခငျြ ပါတယျ။မိတ်ထီလာ မွို့နေ သံဃာတျောမြား မွို့မိ မွို့ဖ မြား တာဝနျရှိ အဖှဲ့အစညျးမြား လူပုဂ်ဂိုလျ မြားကို ကြှနျတျော အနူးအ ညှတျ တောငျးပနျပါတယျ။သံဃာတျောတှေ ကို လူမှုကှနျ ယကျ ကနေ စျောကား မိတဲ့ Dr.ကြျောဝငျးသနျ့ ရဲ့ မိသားစုဝငျတှေ မိထ်တီလာ မှ အဝေးကို ပွောငျးရတော့မယျ… သူ့ရဲ့ ဇနီးနဲ့ ကလေးလညျး ရနျကုနျအိမျမှာ မနရေဲတော့ပါဘူး…။
သူတဈဦးရဲ့ အမှား ကွောငျ့ ကနျြမိသားစုဝငျတှေ အားလုံး အကြိုးသကျရောကျ သှားရ ပါတယျ။ စိတျမကောငျး ပါဘူး။ မှားတာ မှနျတာ အသာထား။ လောလောဆယျ လကျငငျး ဒုက်ခ တှရေ့ပွီး။ အကွောငျးတရား ကွောငျ့ အကြိုးဖွဈလာလပွေီ…Dr. ကြျောဝငျးသနျ့ရဲ့ညီ ရေးထားတဲ့ Post ပါ…။ကြှနျတေျာ့ အကိုဟာ တရားဥပဒေ ရဲ့ ဆုံးမမှုကိုခံယူမှာဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ လိုငျးပျေါမှာ တဈခြို့မဟုတျ မမှနျသတငျးတှနေဲ့ အရမျးကိုဖှနတောတှရေ့တဲ့အတှကျ ကြှနျတျောဖွရှေငျးခငျြတာ လေးတှရှေိပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ မိသားစုဟာ ရိုးရိုးသားသားပဲနကွေသူတှပေါ။ ဘယျပါတီ ဘယျအဖှဲ့အစညျးဝငျမှလညျးမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့အကိုဟာ လညျး ဘယျပါတီဝငျမှ မဟုတျသလို ဘယျအဖှဲ့အစညျးနဲ့မှလညျး ပါတျသတျမှုမရှိပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့အကိုဟာ သူတငျတဲ့နတေု့နျးက ရနျ ကုနျမှာပါ။ မိတ်ထီလာမွို့မှာမရှိပါဘူး။ မိတ်ထီလာမွို့မှာ ကြှနျတျောရယျ အဖရေယျ အမရေယျပဲရှိပါတယျ။ ပထမဆုံးသတငျးတှေ တကျလာ တဲ့နကေ့ ကြှနျတျောတို့ မိတ်ထီလာအိမျလိပျစာအတိအကနြဲ့ တငျကွပါတယျ။
ကြှနျတေျာ့အဖနေဲ့ အမဟော ကနျြးမာရေးမကောငျးပါဘူး။ လူငယျဆိုလို့ အိမျမှာ ကြှနျတျောတဈယောကျတညျး ရှိတာပါ။ မတျောတဆ လူ တှဝေိုငျးလာရငျ ကြှနျတျောတို့အတှကျ အန်တရာယျ အရမျးမြားပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ သိသိခငျြး ရပျမိရပျဖ တဈခြို့နဲ့ တှဆေုံ့ပွီး အကွံအ ဉာဏျတောငျးပါတယျ။ အကွံပေးတဲ့အတိုငျးပဲ အဖရေယျ ကြှနျတျောရယျနှဈယောကျ လိုကျပွီး တောငျးပနျပါတယျ။ အဲဒီမှာ မွို့ရဲ့အဖှဲ့အ စညျးတဈခြို့က ပုဂ်ဂိုလျတှကေ လူကိုယျတိုငျ လာတောငျး ပနျမှကနြေပျမယျဆိုပွီးပွောပါတယျ။
ကြှနျတေျာ့အကိုဆီကိုဖုနျးဆကျပွီး သူလာနိုငျမဲ့နကေို့ မေးတဲ့အခါ သူက ခကျြခငျြး ရနျကုနျကနေ မိတ်ထီလာကိုဆငျးလာခဲ့မယျဆိုပွီး ပွော ပါတယျ။အဲဒီအခြိနျမှာ တဈခြို့ ဖစေ့ဘှတျအကောငျ့တှကေနေ လူကိုယျတိုငျ လာမတောငျးပနျပဲ ညီနဲ့အဖကေို ကိုယျစားပဲလှတျတယျ ဆို ပွီးတငျပါတယျ။ ကိုယျစားလှတျတာမဟုတျပါဘူး သူကိုယျတိုငျက မွို့ပျေါမှာမရှိတာပါ။ ကြှနျတျောတို့တှေ အားလုံးတောငျးပနျပွီး ညနေ အခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့ အိမျကို ရပျကှကျ မှ တာဝနျရှိ လူကွီးမြားရောကျရှိလာပါတယျ။
ကြှနျတျောသတငျးတငျတဲ့သူတှကေို အိမျလိပျစာဖကျြခိုငျးလိုကျပမေယျ့ သူတို့ပွငျပေးတဲ့အခါ သတငျးက အရမျးပြံ့နှံ့သှားပါပွီ။ ကြှနျတျော တို့ အိမျ‌ကိုလညျး စောငျ့ကွညျ့နကွေတဲ့သူတှေ ရှိနကွေောငျးလညျး အဖှဲ့အစညျးမြား မှပွောပါတယျ။ ကြှနျတျော တို့လညျး အပွငျမထှကျ ရဲပါဘူး။ ညကြှနျတေျာ့အကိုရောကျလာတဲ့အခါ ရပျကှကျထဲက လူကွီးတှကေိုယျတိုငျသှားရောကျချေါဆောငျလာပါတယျ။ကြှနျတျောတို့ကို အဖှဲ့အစညျးအခြို့က လူတှကေ ကိုကြျောဝငျးသနျ့ကိုယျတိုငျ မိတ်ထီလာမွို့မှာ ပါခြုပျဆရာတျောကို ပငျ့ပွီး ဖစေ့ဘှတျ မှ live အပါအဝငျ အခနျးအနားနဲ့ နိုငျငံတျောအဆငျ့တောငျးပနျပေးရပါမယျဆိုပွီးပွောပါတယျ။
ဒီမှာ ထပျပွီးပွောကွားလိုတာက ကြှနျတေျာ့အကိုဟာ ဖွဈလာမယျ့ အကွောငျးအရာကို သူနားလညျပါတယျ။ သူ့ကိုတဈခါတညျး ဖမျးသှား နိုငျတယျဆိုတာလညျး သူသိကွောငျး ကြှနျတေျာ့ကိုပွောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့လုပျရပျကိုတောငျးပနျမယျ ရငျဆိုငျစရာရှိတာ ရငျဆိုငျရမှာ ပဲဆိုပွီး အရောကျလာပါတယျ။ကြှနျတျောတို့နောကျနေ့ ကိုးနဝငျးကြောငျးကို ရောကျတဲ့အခါ လူတှေ အမြားကွီးစုဝေးနေ တာကိုတှရေ့ပါ တယျ။ ကြှနျတျောတို့တောငျးပနျတဲ့အခါ ဆရာတျောကွီးတှဟော ခှငျ့မလှတျကွပါဘူး။
အဲဒီအခြိနျမှာ အပွငျက လူစုကွီးဟာ အျောဟဈနကွေပါပွီ။ ကြှနျတျောတို့အရမျးကွောကျပါတယျ။ ကြှနျတျောသရေမှာထကျ ကြှနျတေျာ့ အဖအေမေ တဈခုခုဖွဈမှာကို ပိုစိုးရိမျပါတယျ။ “အကိုကိုမရိုကျရရငျ ညီကိုရိုကျကှာ” ဆိုတဲ့အသံတှလေညျး နားနဲ့ကွားခဲ့ရပါတယျ။ နောကျ ပိုငျးအဖွဈပကျြကတော့ live မှာမွငျတှကွေ့တဲ့အတိုငျးပါပဲ။ ကြှနျတေျာ့အကိုကိုချေါသှားတဲ့ ရဲကားကိုခဲတှနေဲ့ဝိုငျးထုကွပါတယျ။ ရဲအခြို့ ဒဏျရာရသှားတယျပွောပါတယျ။ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှေ သံဃာတျော‌တှေ ရပျမိရပျဖတှေ ကနျြးမာခမျြးသာကွပါစခေငျဗြာ။
သူတို့သာမရှိရငျ ကြှနျတျောတို့ မိသားစုဟာ အသတျခံရပါပွီ။ ကြှနျတျောတို့ ကနျြတဲ့ မိသားစုဟာ မိတ်ထီလာမွို့မှာ မနရေဲတော့ပါဘူး။ ကြှနျ တျောတို့ အဝေးတဈနရောကို ထှကျသှားပါတော့မယျ။ ရပျကှကျက တာဝနျရှိလူကွီးတှလေညျး အဝေးတဈနရောကို သှားဖို့အကွံပွုပါ တယျ။ အခုအခြိနျမှာ ကြှနျတေျာ့အကို ဘယျမှာလညျးဆိုတာ မသိရပါဘူး။ သတငျးဌာန တဈခြို့က မန်တလေးမှာလို့လညျးတငျကွပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အကိုမှာ ဇနီးနဲ့ လူမမညျအရှယျသမီးလေး တဈဦးရှိပါတယျ။
တဈခြို့ အကောငျ့တှမှော မဆိုငျတဲ့ ကြှနျတေျာ့အကိုရဲ့ ဇနီးနဲ့ကလေး မိသားစုဝငျတှကေိုပါ ဓာတျပုံနှငျ့တကှတငျပွီး အသကျအန်တရာယျကို ခွိမျးခွောကျနကွေပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အကိုရဲ့ ရနျကုနျလိပျစာ တှလေညျးတငျကွတဲ့အတှကျ သူတို့လညျး အဲဒီမှာ မနရေဲတော့ပါဘူး။ ပွီး တော့ သူသနေတျကိုကိုငျပွီး တငျထားတဲ့ပုံကို ဝိုငျးဖှနတောလညျးတှရေ့ပါတယျ။ အဲဒီပုံဟာ လှနျခဲ့တဲ့ လေးနှဈလောကျတုနျးက ပုံပါ။ ကြှနျ တေျာ့အကိုဟာ NGO အဖှဲ့တဈခုမှာ အလုပျလုပျခဲ့ ပါတယျ။ ကရငျပွညျနယျ ကယားပွညျနယျ နယျစပျတှကေိုသှားရပါတယျ။
အဲ့ဒီ သနေတျဟာ လသေနေတျပါ။ နယျစပျတှေ မှာပေါပါတယျခငျဗြာ။ အဲဒီပုံကိုပွပွီး အဖှဲ့အစညျး တဈခုခုကြောထောကျနောကျ ခံရှိရ မယျဆိုပွီးပွောနကွေပါတယျ။ ဘယျအဖှဲ့အစညျးမှ လသေနေတျလိုလိုတူမီးလိုလို သနေတျတှေ မကိုငျကွပါဘူး။အခုခတျေဟာ ဖစေ့ဘှတျ အကောငျ့တဈခုကို လှယျလှယျလေး ဖှငျ့လိုရတဲ့ခတျေပါ။ အဓိကရုဏျးတှအေတှကျဖှနကွေတဲ့အကောငျ့တှဆေိုတာ အကောငျ့တုတှေ မြားပါတယျ။ လူတဈယောကျဟာ သူ ဖစေ့ဘှတျမှာ အမှတျမထငျ တငျလိုကျတဲ့ post တဈခုကွောငျ့ သူ့မိသားစုကို ထိခိုကျမယျဆိုတာ သိရငျ သိသိကွီးနဲ့ အကောငျ့အစဈကနေ တငျစရာအကွောငျးမရှိပါဘူး။
ကြှနျတေျာ့အကိုဟာ အရကျသောကျပါတယျ။ သူ့မှာ အဝလှနျနတေော့ ဒေါသအလှယျထှကျတကျပါတယျ။ သူ post တှတေငျတဲ့နတေု့နျးက အရကျသောကျထားပါတယျလို့ ပွောပါတယျ။ အရကျမူးတဲ့ကောငျဟာ ခြီးကြှေးရငျ မစားဘူး ဆိုကွပမေယျ့ အရကျနဲ့ဒေါသ နှဈခုပေါငျး လိုကျတဲ့အခါမှာ သိစိတျရော မသိစိတျရော လှတျသှားတတျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ Post မှာ လကျမခံတဲ့သူတှနေဲ့ပွောရငျးပွောရငျး ဒေါသရယျ အ ရကျရယျ ပါလာတဲ့အခါ တဈဖကျသား နာအောငျ အဆုံးထိပွောမိသှားပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ညီအကိုနှဈယောကျလညျး အဲဒီကိစ်စနဲ့ရနျ ဖွဈနကေပြါပဲ။ သူကိုယျတိုငျလညျး ဒီလောကျထိဖွဈသှားမယျလို့ မထငျခဲ့မိပါဘူး။
ဌားနေသောအိမ်သို့ရောက်လာသော ဧည်သည်ငါက နဂါး မယ်တော် နင်တို့ကို အကုန်ပြုစားလိုက်မယ် ဆိုပြီး အစစ်ဆေး မခံတဲ့ မန္တလေးသူ (ရုပ်သံ)
Mask ချုပ်ပြိုင် ပွဲ မှာ ဆုရ ရှိသူ (၃) ဦးကို အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ကြေငြာ
တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ပြည်တော်ပြန်များအား Quarantine ပြုလုပ်ထားကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ပြော
အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက် တာ လဲ့လဲ့မော်ကို အမှု(၃)ခုအတွက် တစ်ခုချင်းစီ ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်